‘आजको उम्मेद्धार छनौटमा मेरो यसकारण असहमति’ – Nepali Health
‘आजको उम्मेद्धार छनौटमा मेरो यसकारण असहमति’
२०७६ मंसिर २ गते १९:०८ मा प्रकाशित
आगामी माघ महिनामा नेपालको पहिलो व्यावसायिक संस्था नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को २८ औँ केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिको निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचनका लागि उम्मेद्धार घोषणा गर्ने काम शुरु भएको छ ।
एनएमएमा मुलत दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । एउटा प्रजातान्त्रिक समूह र अर्को प्रगतिशील समूह । दुई समूहबीचको प्रतिस्पर्धामा अहिलेसम्म मेरो आवद्धता रहेको प्रजातान्त्रिक समूहले बाजी मार्दै आएको छ । यस अर्थले पनि हाम्रो प्रजातान्त्रिक समूहको उम्मेद्धार को बन्छ भनेर विशेष चासो रहन्छ । र, म जस्तो संगठनका लागि रातदिन नभने खटनेका लागि त विशेष नै । तर आजको घोषणाले मेरो चित्त दुखाएको छ । मेरा सिनियरले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन ।
मैले एनएमएमा दुई कार्यकाल विताएँ । अघिल्लो कार्यकाल सदस्य भएँ भने त्यसपछि अहिले सह कोषाध्यक्ष । यो दुई कार्यकालको गणना गर्दा मैले एनएमएमा करीब करीब ९ बर्ष विताईसकेको छु । अहिले सहकोषाध्यक्ष पद भएपनि कोषाध्यक्ष एक बर्ष अध्ययन्का लागि बाहिर जाँदा सो जिम्मेवारी पनि कुसलतापूर्वक मैले नै सम्हालेको हुँ । सबैलाई थाह छ चिकित्सक संघले गर्ने हरेक गतिविधिमा मेरो संक्रिय सहभागिता रहेको छ । चाहे त्यो नीति निर्माण तहमा हो या दवाव मुलक कार्यक्रममा । एनएमएको गरिमा बढाउन मैले मेरो तर्फबाट सतप्रतिशत काम गरेँ जस्तो लाग्छ ।
यस अर्थमा मैले सुरु देखिनै आगामी निर्वाचनमा महासचिव पदका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेको थिएँ । तर आज एकाएक मलाई सहसचिव पदमा उम्मेद्धारी बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको खबर बाहिर आयो । यसमा मेरो पूर्ण असहमति छ ।
म अहिलेको सह कोषाध्यक्ष हुँ । त्यसैले मेरो महासचिवमा दावेदारी थियो । तर समितिले एनएमएमा म भन्दा जुनियरलाई महासचिव बनाउने घोषणा गरेछ । अन्त नभएपनि चिकित्सा पेशामा सिनियर र जुनियर हुन्छ । एनएमएमा म अहिले महासचिवको उम्मेद्धार बनाइएका व्यक्तिभन्दा सिनियर हुँ । त्यसैले उनी भन्दा मुनिको तहमा उम्मेद्धार बन्न नैतिकताले नै दिने कुरा भएन ।
यहाँ निर एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहेँ, मैले मलाई नै महासचिव हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । म भन्दा सिनियर व्यक्तिलाई महासचिवमा उम्मेद्धार बनाइएको भए मलाई त्यो भन्दा मुनिको पदमा बस्न गाह्रो हुन्थेन । तर म भन्दा जुनियरलाई म माथि ल्याएर उठाउँदा म त्यहाँ रहने कुरा हुँदैन ।
उम्मेद्धार छनौट गर्ने टोलीलाई थाह हुन पर्ने हो । अहिले महासचिवमा उम्मेद्धार बनाइएका व्यक्ति समायोजन पछि डडेल्धुरा पठाइएका छन् । उनको पदस्थापन पनि डडेल्धुरामा भएको छ । डडेल्धुरामा पदस्थापन भएको व्यक्तिले एनएमएको महासचिव जस्तो पदमा कसरी काम गर्न सक्छ ?
अर्को मेरो असन्तुष्टी भनेको टोलीले आज घोषणा गरेको उम्मेद्धारमा न मधेसी छ न महिला छ । प्रजातान्त्रिक समूहमा यस्तो पनि हुन्छ र ?
मैले महासचिव पदमा उम्मेद्धार हुनका कसैको चाकडी गरिन । मैले कामबाटै त्यो पदका लागि उम्मेद्धार छनौट हुन्छु भन्ने बुझेको थिएँ । एनएमएमा आजसम्म मैले गरेको इमान्दार प्रयास र कामको रिवार्ड यसरी गरिन्छ भन्ने सोचेको थिइन । त्यसैले यो सहसचिव पदका लागि मेरो सहमति छैन । म जुनियरको अण्डरमा रहेर उम्मेद्धार बन्दिन ।
देशभर थपिए २३२ जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १५ हजार ४९१
उपत्यकाका १२ स्थानबाट १२०० नमूना संकलन गरिदै
कोरोना संक्रमणबाट काठमाडौँका एक वृद्धको मृत्यु, मृतकको संख्या ३२ पुग्यो
मकवानपुरको गढी गाउँपालिकामा १५ श्ययाको अस्पताल बन्ने
स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नयाँ रणनीति खाका कोरिदै